မင်းသမီးချော Jun Ji Hyun နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာများ – Trend.com.mm
မင်းသမီးချော Jun Ji Hyun နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာများ
Posted on March 28, 2018 by Noel
Legend of the Blue Sea ဇာတ်ကားထဲက မင်းသမီးချော Jun Ji Hyun ကိုပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်ဟုတ်! သူမရဲ့ ချောမောလှပတဲ့သဘာဝမျက်နှာလေးရယ်၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကပိုပြီးတော့ချစ်ကြပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားတင်မဟုတ် My Love from the Star ဇာတ်ကားထဲမှာလည်း ချစ်စရာအပြုအမူလေး တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုခဲ့ကြတဲ့မင်းသမီးပါ။သူမဟာ အသက် ၃၆နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီး ဇန်န၀ါရီလက ဒုတိယရင်သွေးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်လုိ့သိရပါတယ်။မင်းသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီလို တရားဝင်ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေအပြင် ပရိသတ်အများစုမသိကြသေးတဲ့
အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။သင်က သူမရဲ့ We Love တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီအကြောင်းလေးတွေတော့ မဖြစ်မနေသိထားဖို့လိုမယ်နော်။
၁။သူမရဲ့ နာမည်က Jun Ji Hyun တစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူး။
သူမကို Wang Ji Hyun လို့လည်းသိကြပါသေးတယ်။၁၉၉၈ခုနှစ်တုန်းက ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Steal My Heart ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်ခဲ့တုန်းက ပရိုဂျူဆာ Oh Jong Rok
က တခြားမင်းသမီးတွေလို ရုပ်ရှင်နာမည်တစ်ခုသုံးဖို့အကြံပေးခဲ့ရာမှ အခုလို Jun Ji Hyun အဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်မဖြစ်ခင် သူမငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းက လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါတဲ့။အသက် ၁၆နှစ်အရွယ်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရာမှ Jun Ji Hyun က ပထမဆုံးမော်ဒယ်လ်အဖြစ် စတင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၃။“My Sassy Girl” ကားနဲ့လူသိများလာခြင်း
၂၀၀၁ခုနှစ်တုန်းက ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်း “My Sassy Girl” ဇာတ်ကားဟာ ပရိသတ်တွေကြားမှာရော ကိုရီးယားချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကြားမှာပါ အခုချိန်ထိရေပန်းစားအောင်မြင်
နေခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ ဒီဇာတ်ကားမှာ အဓိကမင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရင်း နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့တာပါ။
၄။Jun Ji Hyun က သူမနဲ့အချိန်အကြာကြီးရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာပါ
မင်းသမီးချော Jun Ji Hyun ဟာ အချစ်ရေးမှာလည်းကံကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမနဲ့အချိန်အကြာကြီးရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးနဲ့ ၂၀၁၂၊ဧပြီ ၁၃ရက်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးသားလေးကိုတော့လက်ထပ်ပြီးလေးနှစ်အကြာမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒုတိယသားလေးကိုတော့ ၂၀၁၈၊ဇန်န၀ါရီလမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ အမျိုးသားဟာ တောင်ကိုရီးယားက နာမည်ကြီး Hanbok ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်သူ Lee Young Hee ရဲ့ မြေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
သူမကို ဟောလိဝုဒ်မှာလည်း Gianna Jun အဖြစ် သိကြပါတယ်။၂၀၀၉ခုနှစ်တုန်းက Blood: The Last Vampire ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီကားကစပြီး သူမရဲ့ နာမည်က Gianna Jun ဆိုပြီး နာမည်ကြီးခဲ့တာပါ။
၆။ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေကြားမှာ ရေပန်းအစားဆုံးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ မင်းသမီးချော Jun Ji Hyun ဟာ ကိုရီးယားက နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေကြားမှာ ရေပန်းအစားဆုံးမင်းသမီးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်ကြတဲ့သူတွေ ၊ကြော်ငြာရိုက်ချင်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူမကို နာမည်ကြီး Samsung ၊ Lotte Duty Free စတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေအပြင်တရုတ်နိုင်ငံကပါ သူတို့နဲ့ကြေ်ာငြာရိုက်ဖို ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သူမရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ကြော်ငြာ ၁၄ခုကျော်အတွက် ယူအက်စ်ဒီဒေါ်လာ၁၁၅၀၀၀၀၀ မီလံယံတောင်ဝင်ငွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
Legend of the Blue Sea ဇာတျကားထဲက မငျးသမီးခြော Jun Ji Hyun ကိုပရိသတျတှေ ကွိုကျနှဈသကျကွတယျဟုတျ! သူမရဲ့ ခြောမောလှပတဲ့သဘာဝမကျြနှာလေးရယျ၊ ခဈြစရာကောငျးတဲ့သရုပျဆောငျခကျြတှကွေောငျ့ပရိသတျတှကေပိုပွီးတော့ခဈြကွပါတယျ။ဒီဇာတျကားတငျမဟုတျ My Love from the Star ဇာတျကားထဲမှာလညျး ခဈြစရာအပွုအမူလေး တှကွေောငျ့ပရိသတျတှအေခဈြပိုခဲ့ကွတဲ့မငျးသမီးပါ။သူမဟာ အသကျ ၃၆နှဈအရှယျဖွဈပွီး ဇနျနဝါရီလက ဒုတိယရငျသှေးလေးကိုမှေးဖှားခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။မငျးသမီးနဲ့ပတျသကျလို့ ဒီလို တရားဝငျဖျောပွထားတဲ့သတငျးတှအေပွငျ ပရိသတျအမြားစုမသိကွသေးတဲ့
အကွောငျးအရာလေးတှလေညျးရှိပါသေးတယျ။သငျက သူမရဲ့ We Love တဈယောကျဖွဈမယျဆိုရငျ ဒီအကွောငျးလေးတှတေော့ မဖွဈမနသေိထားဖို့လိုမယျနျော။
၁။သူမရဲ့ နာမညျက Jun Ji Hyun တဈခုပဲမဟုတျပါဘူး။
သူမကို Wang Ji Hyun လို့လညျးသိကွပါသေးတယျ။၁၉၉၈ခုနှဈတုနျးက ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ Steal My Heart ဒရာမာဇာတျလမျးတှဲမှာပါဝငျခဲ့တုနျးက ပရိုဂြူဆာ Oh Jong Rok
က တခွားမငျးသမီးတှလေို ရုပျရှငျနာမညျတဈခုသုံးဖို့အကွံပေးခဲ့ရာမှ အခုလို Jun Ji Hyun အဖွဈနောကျပိုငျးမှာပွောငျးလဲခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ရုပျရှငျမငျးသမီးတဈယောကျမဖွဈခငျ သူမငယျရှယျစဉျတုနျးက လယောဉျမယျတဈယောကျ ဖွဈခငျြခဲ့တာပါတဲ့။အသကျ ၁၆နှဈအရှယျမှာ သူငယျခငျြးတဈယောကျက ဓာတျပုံဆရာတဈယောကျနဲ့ မိတျဆကျပေးခဲ့ရာမှ Jun Ji Hyun က ပထမဆုံးမျောဒယျလျအဖွဈ စတငျလုပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
၃။“My Sassy Girl” ကားနဲ့လူသိမြားလာခွငျး
၂၀၀၁ခုနှဈတုနျးက ရိုကျကူးခဲ့တဲ့အခဈြဇာတျလမျး “My Sassy Girl” ဇာတျကားဟာ ပရိသတျတှကွေားမှာရော ကိုရီးယားခဈြဇာတျလမျးတှကွေားမှာပါ အခုခြိနျထိရပေနျးစားအောငျမွငျ
နခေဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးဖွဈပါတယျ။သူမဟာ ဒီဇာတျကားမှာ အဓိကမငျးသမီးတဈယောကျအဖွဈ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ရငျး နာမညျကြျောကွားလာခဲ့တာပါ။
၄။Jun Ji Hyun က သူမနဲ့အခြိနျအကွာကွီးရငျးနှီးခဲ့တဲ့သူငယျခငျြးဖွဈသူနဲ့လကျထပျခဲ့တာပါ
မငျးသမီးခြော Jun Ji Hyun ဟာ အခဈြရေးမှာလညျးကံကောငျးတဲ့သူတဈယောကျပါ။ သူမနဲ့အခြိနျအကွာကွီးရငျးနှီးခဲ့တဲ့သူငယျခငျြးအရငျးကွီးနဲ့ ၂၀၁၂၊ဧပွီ ၁၃ရကျမှာ လကျထပျခဲ့ပါတယျ။ပထမဆုံးသားလေးကိုတော့လကျထပျပွီးလေးနှဈအကွာမှာမှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပွီး ဒုတိယသားလေးကိုတော့ ၂၀၁၈၊ဇနျနဝါရီလမှာမှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။သူမရဲ့ အမြိုးသားဟာ တောငျကိုရီးယားက နာမညျကွီး Hanbok ဒီဇိုငျနာတဈယောကျဖွဈသူ Lee Young Hee ရဲ့ မွေးဖွဈတယျလို့
သူမကို ဟောလိဝုဒျမှာလညျး Gianna Jun အဖွဈ သိကွပါတယျ။၂၀၀၉ခုနှဈတုနျးက Blood: The Last Vampire ဆိုတဲ့ဇာတျကားမှာပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ဖူးပါတယျ။ အဲ့ဒီကားကစပွီး သူမရဲ့ နာမညျက Gianna Jun ဆိုပွီး နာမညျကွီးခဲ့တာပါ။
၆။ကိုရီးယားအနုပညာရှငျတှကွေားမှာ ရပေနျးအစားဆုံးတဈယောကျလညျးဖွဈတယျ။ မငျးသမီးခြော Jun Ji Hyun ဟာ ကိုရီးယားက နာမညျကွီးအနုပညာရှငျတှကွေားမှာ ရပေနျးအစားဆုံးမငျးသမီးတဈလကျလညျးဖွဈပါတယျ။သူမနဲ့ရုပျရှငျရိုကျခငျြကွတဲ့သူတှေ ၊ကွျောငွာရိုကျခငျြကွတဲ့သူတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။သူမကို နာမညျကွီး Samsung ၊ Lotte Duty Free စတဲ့အမှတျတံဆိပျတှအေပွငျတရုတျနိုငျငံကပါ သူတို့နဲ့ကျွောငွာရိုကျဖို ကမျးလှမျးခဲ့ကွတဲ့သူတဈယောကျပါ။သူမရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ကွျောငွာ ၁၄ခုကြျောအတှကျ ယူအကျဈဒီဒျေါလာ၁၁၅၀၀၀၀၀ မီလံယံတောငျဝငျငှရေရှိခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။